Accueil > Gazetin'ny nosy > « Moto – scooter » : Tokony hojerena akaiky ny lalàna mifehy azy
« Moto – scooter » : Tokony hojerena akaiky ny lalàna mifehy azy
Mpisetrasetra ny ankamaroan’ny mpitondra « moto scooter » eto andrenivohitra. Mirifarifa sy mitsoriadriaka izy ireo eny an-dalana sy any anaty fitohanan’ny fiara. Tsy tia mandeha moramora. Manapaka tampotampoka eny am-pandehanana. Tsy mahandry tantana fa misongona hatrany na dia amin’ny toerana isakanan’ny mpitandro filaminana aza. Izay hahafaka azy hatrany no ataony fa tsy miraharaha ny hafa.
Etsy ankilany, tsy ny mpamily fiara ihany no voatohintohina amin’ ny ataon’izy ireo fa ny mpandeha an-tongotra eny an-dalana ihany koa. Rehefa tsy misy hirika ahafahany mitsofotsofoka mantsy any anaty fitohanana dia miakatra « trottoir » izy ireo. Mihafihafy noho izany ireo mpandeha an-tongotra. Matahotra sao voadona ka mikisaka homban’izy ireo. Manafintohina ary mahatezitra ny maro izany zavatra izany. Tsy fanajana ary tsy fahaizana miara-belona amin’ny be sy ny maro.
Tratran’ny lozam-pifamoivoizana matetika ny moto vokatra ny fandehanany mafy. Tapa-tongotra, tapa-tanana, ary misy mamoy ny ainy mihitsy ny mpitaingina azy. Miteraka fahavoazana ho an’ny hafa ihany koa ny ataon’izy ireo. Maro ny mpamily miala moto eny an-dalana no tratran’ny lozam-pifamoivoizana. Vokany, simba ny fiara, maratra mafy ary misy ny mamoy ny ainy.
Tokony hojeren’ ny tompon’andraikitra akaiky ny fifehezana ireo moto ireo. Mila fanaraha-maso akaiky hisorohana ny loza mety hitranga sy ho fanajana ny mpifamoivoy namana. Raha ny lalàna nivoaka momba ny fifamoivoizana mantsy no jerena dia ny fiara no tena voakasika. Kanefa ny kodiaran-droa dia isan’ny iray lehibe manakorontana ny fifamoivoizana eto an-toerana izay tsy mitsaha-mitombo andro aman’alina ny olona manana sy mampiasa azy.
Jean Claude (stagiaire)